[Usezingeni] Lapho ama-telecom giants eclipse the rest of tech (2/3) - Jeune Afrique - Tamban RELAY
[Usezingeni] Lapho ama-telecom giants eclipse the rest of tech (2/3) - Jeune Afrique
By TELES RELAY On Agasti 11, 2020
Bayingxenye yesikhundla sethu sobuntu obu-100 obubalulekile base-Afrika abangama-2020: bangabadlali bezingcingo, ababuyisele umsebenzi wabo ngokushaya igagasi lokuthuthuka kwedijithali ezwenikazi.
[Usezingeni] Ama-Afrika angama-100 anethonya kakhulu ngo-2020
Kepha baye kuphi? Akukho ukulandelela kulo nyaka wabamele umnotho wewebhu. Abasunguli beJumia nabanye abaholi base-Afrika be-Google, i-Apple, i-Facebook, i-Amazon ne-Microsoft (Gafam) banikela ngale ndlela kulo nyaka embonini yama-telecom ephethe ukucabanga ngezinsizakalo futhi bawasebenzise amathuba anikezwa ngocingo oluhamba phambili kanye neqembu kudlula.
Amandla kubuchwepheshe base-Afrika ngakho-ke ahlala engabaphathi bamaqembu amakhulu endabuko kwezokuxhumana ngocingo. Phakathi kwabo, isithonjana uRob Shuter ohlala izinyanga zakhe zokugcina ekhanda leMTN elitholakele azosishiya ngoMashi 2021.
Izimisele ukuzisungula njengabasebenza kakhulu base-Afrika bezisebenzi zedijithali kulelizwekazi, leli qembu lishayisa isikhali salo esiyimfihlo: ukusondela ngezilimi zasendaweni ezinikezwe kuthuluzi lokuxoxa elihlose ukuthi ukuphela kokungena ngamakhulu ezinkulungwane izinsiza (imali yeselula, umshuwalense wasebhange, ukuzijabulisa, njll.).
UHasanein Hiridjee, omusha
Alongside Alioune Ndiaye (Orange Africa kanye ne-Middle East) osanda kwethula i-Orange Bank e-Afrika, noma uMike Adenuga, umphathi we-Nigerian Globacom efuna ukwanda kwamanye amazwe, uHasanein Hiridjee wenza ukungena kwakhe ekilabhini yabantu abayi-100 abanethonya kusuka ezwenikazi. Ngifanele ukusho lokho umphathi we-Axian ehlukahlukene (ezezimali, ama-telecoms, ama-real estate, i-energy) akakaze ayeke ukukhulunywa ngaye ezinyangeni ezedlule.
Ngaphezu kwephesenti elibambe eFree eSenegal, liphinde lakhona eTogo lapho lathola khona ngonyaka ka-2019 i-opumbent opharetha, iTogocom, efisa ukuyiguqula ibe umbukiso ongaphansi kweSahara weqembu layo.
Ngoba lokho okubalulekile oLwandlekazi i-Indian lapho kulawula khona opharetha weTelma eMadagascar naseComoros, kanye noTélécom Réunion-Mayotte, akafisi ukumisa lapho. Ngempela u-Axian ufake isicelo sokutholwa kwelayisense elisebenza ngasese e-Ethiopia.
Owukuphela komuntu wesifazane osesigabeni, uRebecca Enonchong
UJacobus Petrus, owaziwa ngo- “Koos” Bekker, uhlanganyela nalo moya unqobayo. Yize manje esehoxe kakhulu emsebenzini wesikhulu esikhulu saseNingizimu Afrika, uNasper, usengumongameli weqembu elihlukile Prosus yakhe exhaswa ngemali engaphezulu kwamadola ayizigidi eziyikhulu kumakethe yamasheya aseAmsterdam.
Impumelelo uNaspers ayikweleta le ndoda eneminyaka engama-67 ubudala ngonyaka ka-2001 yamaza amandla e-juggernaut yase-China kanye nezinsizakalo zeselula ngokuthola amasheya angama-46,5% enkampani entsha. Lokhu kuhamba kwe-poker kuvumela amaNaspers ukuba abe nesigxobo samadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-130 ku-conglomerate yaseChina.
Owukuphela komuntu wesifazane ozovela kulesi sigaba, uCameroonia Rebecca Enonchong, akaqoqi ithonya lakhe emnyangweni weziteleka zezezimali kepha kunalokho ekuxhumaneni kwakhe nabezindaba okuhambisana nesishoshovu esivuna ushintsho lwedijithali lwamabhizinisi amancane naphakathi ezwenikazi.
Hlakanipha ngemisebenzi I-AppsTech, inkampani yakhe isunguliwe emazweni acishe abe ngamashumi amane futhi abhekelele ngqo isoftware yokuphathwa kwebhizinisi kuma-VSEs nama-SME, lo mgubho wamashumi amahlanu uhlala ngezwi elibalulekile futhi ligqugquzela osomabhizinisi abaningi abasha ezwenikazi. Kwanele ukuyiqinisekisa indawo endaweni yethu yama-2020.
URobert Shuter, umphathi we-MTN (South Africa)
URob Shuter, uMqondisi ophethe weMTN engqungqutheleni Yotshalomali YaseNingizimu Afrika yango-2019 © MTN Group / Twitter / 2019.
NgoMashi, uRob Shuter wayecabanga ukuthi angamhlasela ngokuthula unyaka wakhe wokugcina njengomphathi weqembu leNingizimu Afrika iMTN. Ngenxa yokufika kwayo ngo-2017 evela eVodafone, inkampani ehola izwekazi ehamba phambili ngokwesibalo samakhasimende yaqeda impikiswano yayo nabaphathi baseNigeria ngokukhokha inhlawulo yerekhodi lamaRandi ayizigidi eziyinkulungwane, kodwa futhi yathuthukisa inzuzo yayo futhi yamemezela ukuphinda ichaze imisebenzi yayo esemqoka.
Ukuhlelwa kabusha kwama-accents ezezimali akuzange kusimangaze ukuthi owesilisa, ngemuva kokuqala umsebenzi wakhe wokucwaninga amabhuku eDeloitte, wabe esebamba izikhundla eziphezulu eStandard Bank naseNedbank. Kepha kubhaliwe ukuthi isigaba seRob Shuter ngaphakathi kweMTN, umholi onobuhlakani njengoba sisebenza ngempumelelo, sizophawulwa ngemicimbi ekhethekile.
Ekuvukeni kwenhlupheko ye-coronavirus, lo mlandeli wokuhamba ngezinyawo uthathe isinqumo sokunciphisa ukutshala kweqembu lakhe ngama-20% kulo nyaka. Ngakho-ke igcina amandla ayo okutshala imali e-Ethiopia uma ikwazile ukuthola ilayisense lapho. Ifayela angenaso isiqiniseko sokuthi uzobona umphumela ngaphambi kosuku lokuhamba kwakhe, oluhlelelwe uMashi.
URebecca Enonchong, umsunguli we -AppleTech (eCameroon)
Cameroonia Rebecca Enonchong. © uPatrick Nelle weJA
Njengomabhizinisi ukuthi uRebecca Enonchong, 53, uzenzele igama ohlelweni lomhlaba jikelele lobuchwepheshe obusha. Kepha i-aura yomsunguli we -AppleTech (umphakeli wesoftware yokuphatha) selokhu weqa imingcele yobuchwepheshe.
ECameroon, lo mdabu waseNyakatho Melika okhuluma isiNgisi ungomunye wamazwi empi yokulwa nokungabi nabulungiswa kwezenhlalo. Ngo-2017, waphatha ukugqugquzelwa kwe- #BringBackOurInternet kude, ngemuva kokuthi uhulumeni eyekile ukungena ku-inthanethi ezifundeni ezikhuluma isiNgisi esisenkingeni yenkulu yezepolitiki yezenhlalo.
Kusukela lapho, uRebecca Enonchong akathandabuzi ukusebenzisa izethameli zakhe ezikhulayo (ababhalisile abangaphezu kwe-105 kuTwitter) ukusola ukungalungi okwenzeka ezweni lakhe. I-ActiveSpaces, incubator yokuqalisa eyethula e-Cameroon, iyaqhubeka nokwandisa inethiwekhi yayo. NgoJulayi, inkampani encane yavula igatsha elisha entshonalanga yezwe.
UHasanein Hiridjee, umphathi weqembu lama-Axian (Madagaska)
UHasanein Hiridjee © Eric Lefeuvre
Ukube ubesevele ephakathi kwama-100 anethonya kakhulu e-Afrika ngonyaka ka-2019, uHasanein Hiridjee, 44, uthuthuka ngokuqinile kulo nyaka ngenxa yezindaba ezicebile impela. Iqembu lomndeni i-Axian, alikuphethe kusukela ngonyaka ka-2015, yethule inethiwekhi kamakhalekhukhwini eyi-5G eMadagascar ngasekupheleni kukaJuni, ihlanganisa isimo sayo njengomholi kuzwelonke kwezokuxhumana ngocingo.
Kuyasebenza futhi kulo mkhakha eSenegal naseTogo, ukubheja ekuqoqweni kwezwekazi lonke okusebenzisa amaselula. Njengamanje esebhange, ekusatshalalisweni, ekuthengisweni kwezezakhiwo nakwezolimo, i-Axian nayo iyasebenza emkhakheni wezamandla, ngamaphrojekthi amakhulu kagesi e-Uganda naseMali.
Ekupheleni konyaka ka-2019, leli qembu liphinde lavula e-Antananarivo NextA, isishoshovu sokuqalisa esiphefumlelwe isiteshi F, eParis, ngo-bilionire Xavier Niel.
Apollinaire Compaoré, umphathi weqembu le-Planor Afrique (Burkina Faso)
I-Apollinaire Compaoré © Jacques Torregano ye-JA
Yize kwenzeka i-2020 eyenzeka ngenxa yenkinga yezempilo, umphathi onamandla weqembu le-Planor Africa iqinisekisa futhi inhloso yayo yokuqhubeka nokutshalwa kwemali kwayo kuma-telecom nama-banking. Bangaphezu kwama-55 bhiliyoni ama-CFA ama-francs (ama-euro ayizigidi ezingama-84), isigamu sawo esizokhishwa kulo nyaka, adingekayo ukuvuselela ilayisense le-4G leTelecel Faso, elilungiselela ukwethula iTelecel Money, insizakalo yalo yasebhange elihamba phambili.
E-Mali engomakhelwane, u-Apollinaire Compaoré uhlose ukutshala ama-CFA ama-CFA acishe abe yizigidi eziyizinkulungwane ezingama-150 ukuze athuthukise iTélécel Mali, okufinyelele kuyo ingqophamlando yababhalisile besigidi. Lesi samba sizosetshenziswa ukuvula izinkampani ezimbili ezingaphansi kwebhange. Lo mfundi oneminyaka engama-XNUMX ubudala, futhi ongumphathi wabaphathi beBurkinabè, naye ufunda inketho yokuqalisa iWendkuni Bank International engaphandle kwemingcele yezwe. Ngokwemininingwane yethu, iMali neCôte d'Ivoire ikakhulu ekuboneni kwayo.
UMike Adenuga, UMongameli weGlobacom (Nigeria)
UMike Adenuga, umsunguli weGlobacom. © uJacques Witt / SIPA
Lowo ophonsela inselelo u-Aliko Dangote, uMichael Adeniyi Agbolade Ishola Adenuga Jr ungusomabhiliyoni kanye neNigerian, njengezimbangi zakhe, futhi wakhe inqwaba yezimali zakhe emkhakheni wamafutha, ikakhulukazi nenkampani yakhe yokuhlola iConoil. Ku-67, futhi ubusa opharetha weselula wesibili ngobukhulu eNigeria, i-Globacom.
Uthole iziqu ePace University eNew York, lo baba wabayisikhombisa obehlala ekuqaleni konyaka ka-2020 ebekwe endaweni yesithathu esigabeni sabantu abayizigidigidi zase-Afrika, ngemuva kuka-Aliko Dangote noNaguib Sawiris, ngenhlanhla elinganiselwa ezigidini eziyi-7,7 zamarandi ngokusho kukaForbes .
Alioune Ndiaye, Umqondisi wase-Afrika we-Orange (Senegal)
U-Alioune Ndiaye, I-CEO ye-Orange Africa, eParis, ngonyaka we-2018 © François Grivelet ye-JA
NgoJanuwari, iSenegalese Alioune Ndiaye ngokuziqhenya yamisa indlunkulu entsha ye-Orange Africa (ayilawula kusukela ngonyaka we-2018), eCasablanca. Manje kukhuphuke iziqu ze-Institut Mines-Télécom Business School kanye neParis-Dauphine University, ezinde ekhanda leSenegalese elixhaswe yiqembu leSonatel, ukufezekisa izinhloso zezezimali ezibekwe ngu-CEO wayo, uStéphane Richard.
Ngo-2025, i-Orange ihlose ukuzuza ama-20% okuvela kwayo e-Afrika. Ukufeza lokhu, u-Alioune Ndiaye uzokwethula i-Orange Bank eCôte d'Ivoire ekupheleni konyaka, ngaphambi kokubheka amanye amazwe e-WAEMU.
Ngaphezu kwakho konke, uzozama ukuthola ilayisense e-Ethiopia, izwe elinabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-100 - esinqume ukuvula umkhakha wama-telecoms ukuncintisana - nokungena kwenye imakethe enkulu: South Africa, Nigeria noma, kungani, Algeria. Lawa maprojekthi angaxhaswa ngezimali nge-IPO yenkampani ephethe ehlanganisa yonke imisebenzi yama-opharetha ase-Afrika.
UKoos Bekker, I-CEO ye-Naspers (South Africa)
U-Koos Bekker, owazalelwa ePotchefstroom ngo-1952, usekhondweni lemali elinganiselwa ezigidini eziyizinkulungwane ezingama-2,3. Ngemuva kokuqala umsebenzi wakhe wokukhangisa, wasungula nozakwabo abambalwa abancane abakwaM-Net, enye yezinsizakalo zokuqala ezimbili zethelevishini ezakhokha imali eNingizimu Afrika.
Ngo-1997, waba yi-CEO yeqembu labezindaba leNaspers futhi wasungula uhlelo oluqondile lokuholelwa lapho: akazange athole umholo, akukho bhonasi noma izinzuzo, ethola kuphela izinketho zesitoko. Eminyakeni eyishumi nanhlanu, ukukhokhelwa kwemakethe yakwaNaspers kukhule kusuka ku- $ 1,2 billion kuya ku- $ 45 billion.
TELES RELAY 24424 izikhala 1 amazwana
OL: INewcastle iphuphe ngoCavani, bazoba noTraoré - FOOT 01
ECameroon: UPaul Biya uvumela ukunyakaza okukhulu ngaphakathi kwezomthetho - uJeune Afrique